mai 2017 - Page 3 sur 35 -
Foara iraisam-pirenena : Handray anjara mavitrika ireo tanora mpandraharaha
Fihaonana isan-taona eo amin’ny sehatry ny teokarena eto Madagasikara. Hotanterahina amin’ny herinandro ho avy io ny andiany faha-12 amin’ny foara iraisam-pirenen’i Madagasikara na ny FIM. Hampiavaka ity andiany ity ny fahamaroan’ireo tanora mpandraharaha izay hampiseho …Tohiny
Fanontaniana mipetraka ny hoe : « Fa naninona no tamin’ny taona 2004 no niforona ny SEFAFI fa tsy talohan’io daty io?”. Ny taona 2004 araka ny didy hitsivolana n° 60-133 du 3 octobre 1960, « récépissé » n° 507 …Tohiny
ONU – SIDA : Noraisin’ny Filoha teny Iavoloha
Mbola lavitra ny dingana handresena ny fihanaky ny tsimok’aretina VIH/Sida eto Madagasikara, indrindra amin’izao vanim-potoana mampirongatra ny fiarahan’ireo mitovy fananahana mivady. Araka ny tatitra azo, amin’ny ankapobeny 0,4 isan-jato ny tahan’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina VIH/Sida eto …Tohiny
Ny mikasika ny famatsiam-bola no nitondran’ ny filoham-pirenena fanazavana ao anatin’ny fotoam-bita voalohany izay nanazavany ny raharaha eto amin’ny firenena. Maro ireo fampiasam-bola izay efa mandeha amin’izao fotoana izao hoy ny filoham-pirenena toy ny fiarahana …Tohiny